7 Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu
Amapaki aluhlaza, izintaba ezintabeni, futhi isimo sezulu esintofontofo siphelele ngokuzijabulisa ngaphandle. Amadolobha amakhulu aseYurophu anakho konke ngakho-ke ungazama yonke imisebenzi yangaphandle i-Europe okufanele inikele. Ukusuka ekubuyiseleni ngamabhayisekili e-Amsterdam kuya e-Munich, lezi 7 amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu yi indawo enhle yamaholide.
1. Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu: Amsterdam, Abase Netherlands
Lapho idolobha lakhiwa eduze kwemisele yemifula, nakanjani uzosebenzisa iholide ngaphandle. I-Amsterdam yaziwa njengedolobha elilungele amabhayisikili kakhulu eYurophu. Ukugibela ibhayisekili akuyona nje indlela yokuhamba kepha kuyindlela yokuphila yabantu bendawo.
Ukuhamba ngebhayisikile kuwumsebenzi omuhle kakhulu ongaphandle eYurophu, zokuhamba nokubona. Enye indlela ukuhlola idolobha esikebheni, ngaphansi kwamabhuloho athandekayo nokwakha amaDashi. Ngisendleleni, ungaphuma uyophuza kwenye i-boa cafe noma indawo yokudlela ebukekayo ngasemfuleni i-Amstel.
Umoya omusha, isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ukushintsha kwezwe kwenza indawo enhle yokuhlala ikhuthele futhi imile kahle ngenkathi useholidini.
ISwitzerland ine ukubukwa okuhle kakhulu e-Europe, futhi iGeneva izungezwe imvelo emangalisayo. Ngakho, abantu bendawo benza okuningi ukubukwa kanye nezindawo ezizungezile, ukuhlala ngaphandle futhi usebenza. Ngokwesibonelo, Lake Geneva, eyaziwa nangokuthi iLake Leman iyintandokazi yemidlalo yamanzi.
Ukugibela izikebhe, ukudoba, i-kayaking, ukubhukuda noma ukugoqa, yimisebenzi embalwa nje yangaphandle okufanele yenziwe eLake Geneva. Ungaqasha isikebhe noma uthathe okungabizi ukuhamba ngomkhumbi.
Uma ungumuntu osezintabeni, khona-ke imigqa yaseSwitzerland Alps 'ibanga elifushane ukusuka edolobheni. Intaba ngebhayisikili, izintaba, ukumisa amatende, nokushushuluza ebusika kuyimisebenzi emihle yangaphandle ongayijabulela eGeneva.
ILyon ukuya eGeneva ngeSitimela
IZurich eya eGeneva ngeSitimela
I-Paris ukuya eGeneva ngeSitimela
UBern ukuya eGeneva ngeSitimela
3. Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu: Munich, Germany
IMunich iyikhaya elikhulu kakhulu amapaki asemadolobheni emhlabeni, Ingadi yesiNgisi. Izindawo ezivulekile neziluhlaza zilungele imisebenzi yangaphandle, ngaleyo ndlela ebeka iMunich phezulu kwe 7 amadolobha amahle kakhulu wemisebenzi yangaphandle eYurophu.
Engadini yesiNgisi, ungahlala usebenza, ngokuya ngokugijima noma ngokubandayo, kwi epikinikini ngasemanzini, ukugeza kwelanga, nokubhukuda. Enye indawo enhle yemisebenzi yangaphandle eMunich ngumfula i-Eisbach eyenziwe ngumuntu, engadini yesiNgisi. Yindawo ayithandayo yama-surfas ekubambeni amagagasi nokwenza amathutha awo.
Dusseldorf to Munich nge Isitimela
INuremberg iya eMunich ngeSitimela
Bonn to Munich ngeSitimela
Ukuhlala edolobheni noma ukuphumela emaphandleni, IVienna lingumuzi owesabekayo wemisebenzi yangaphandle eYurophu. Cruising on the Danube, noma ulibangise ngaphandle kwesikhungo esimatasa eLainzer Tiergarten indawo yemvelo, IVienna inemisebenzi eminingi yangaphandle yokunikela nganoma uluphi uhlobo lwesihambi.
Uma uthatha isinqumo sokuhlala enkabeni, Enye yezindlela ezinhle zokuhamba ukubona ukubona ukuhamba kuka-Segway noma ukuhamba ngomkhumbi emfuleni waseDanube. kodwa, uma ukhetha ukuhlola iVienna njengasendaweni, futhi ukuthola amagugu ayo afihliwe, ke indawo yemvelo iphelele.
25 ama-sq km wezinkuni zasendle kanye nezilwane zasendle zikulindile epaki yedolobha elikhulu kunazo zonke eVienna. Ahambahambe, jog, noma ube nepikiniki kule oasis eluhlaza, kuzokwenza i Isi-Viennese iholide liqediwe.
5. Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu: Zurich, Switzerland
Lapho iziqongo nezindawo zomhlaba zezintaba ze-Alpine zizungeza, nelichibi elihle phambili, nakanjani ungomunye wedolobha elihle kakhulu lemisebenzi yangaphandle eYurophu. IZurich idolobha elijabulisayo nelinempilo, lapho ungahamba khona thatha isitimela se-SZU uye embhoshongweni wokubuka. Umbhoshongo wokubheka ubekwe e-Uetilberg, intaba enhle yedolobha enokubukwa okumangalisayo kwendawo ezungezile.
Uma uthanda izintaba, khona-ke ungakhuphukela ezansi enkabeni ngemizila ehlukahlukene yokuhamba ngezinyawo usuka e-Uetilberg. Omunye umsebenzi omkhulu ongaphandle eZurich ukuzijabulisa osebeni lomfula olungakwesokudla, kumdlalo we-volley yolwandle noma nje uphumule, e-Flussbad Oberer Letten, indawo ye-hangouts yakule ndawo.
Uma uthanda ukukwenza njengesivakashi eZurich, bese ukhuphuka ngesikebhe ngesikebhe uzungeze iLimmatschifffahrt ezokuhambisa ngaphansi kwedolobha 7 amabhuloho.
Interlaken ukuze Zurich ngu zemininingwane
ILugano iya eZurich ngesitimela
Ukugijima noma ukujabulela ukubhukuda ekuseni olwandle, kungenye yemisebenzi ekhuthaza kakhulu. Noma useholidini, ukuhlala usebenza futhi usesimweni esilinganisweni ne ukunambitha ukudla kwasendaweni futhi uzitotose. Phezu kwakho konke lokhu, Isimo esisebenzayo somqondo sizizwa simangalisa lapho i-French Riviera ikungenisa futhi ihlangana ngamandla ne-vithamini c.
I-Nice idolobha elimangalisayo ngemisebenzi yangaphandle eYurophu. Ukugibela amahhashi olwandle, ukubhukuda, ngifuna ama-seahells, futhi ukuba nepikiniki ekushoneni kwelanga yonke kuyimisebenzi emihle engaphandle yokujabulela i-French Riviera enhle kakhulu.
7. Amadolobha amahle kakhulu emisebenzi yangaphandle eYurophu: Florence, Italy
IFlorence ingelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Italy. Ungathola idolobha like bonke abavakashi, noma ngendlela ekhethekile nengenakulibaleka. Ukuhamba noma ukuhamba ngamabhayisekili ngokubuka izindawo nokubuka kuyimisebenzi emibili emihle yangaphandle eFlorence.
Nokho, uma ufuna ukuzama imisebenzi emibili engaphandle eyingqayizivele, neminye imisebenzi engaphandle ehamba phambili eYurophu, bese uzama indiza yebhaluni lomoya oshisayo nesibhakabhaka. Ukwakhiwa kwamapaki kaFlorence namapaki kuyamangaza futhi ukubuka okuvela phezulu kuzokususa umoya wakho.
Uma ufuna ukushaya izixuku zezivakashi futhi uzama imisebenzi emisha yangaphandle, ke uFlorence ungumuzi omangalisayo wemisebenzi yangaphandle eYurophu.
IGenoa iya eFlorence ngesitimela
Parma ukuze Florence ngu zemininingwane
EMilan kuya eFlorence ngeTimela
IYurophu igcwele lezimanga. Kungakhathalekile ukuthi zingaki izikhathi ohambele eYurophu, kuhlale kukhona i-adventure entsha. Esethu 7 amadolobha amahle kakhulu wemisebenzi yangaphandle eYurophu alungele abahambi kanye nabahambi abafuna ukuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, kulabo kini abafuna nje ukuhlola ubuhle bangaphandle namathafa.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uthole amathikithi esitimela ashibhe kunoma iyiphi yale misebenzi yangaphandle.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amadolobha Ahle Kakhulu Emisebenzi Yangaphandle EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / zh-CN ukuba / fr noma / izilimi de nokuningi.
imisebenzi frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna